Kwenzeka ntoni Binance Exchange kwaye xa bid ziqala - Blockchain News
Kwenzeka ntoni Binance Exchange kwaye xa bid ziqala
Ngaphandle izithembiso, Binance akazange aye intanethi ekuseni. Ngaphezu kokuba usuku, umsebenzi technical kwaqala kwi istock exchange, ekufuneka kukhokelela kuphela “ukuhla okwethutyana kwemveliso,” kodwa ekugqibeleni wayeka umsebenzi exchange kunye yayiqhubeka ukuba ixesha elingenammiselo. izolo, Binance CEO Changpeng Jao ​​wabhala on Twitter ukuba kukho ubunzima esingenakubonwa kwangaphambili xa kukhutshelwa data, kwaye ifuna kwakhona ungqamaniso of the database, eya kuthatha iiyure eziliqela.
at 8.00 e Berlin, Jao waphinda wathi kwi imeko, esithi ababhekisi phambili bazama iindlela ezintathu ungqamaniso, ezahlukeneyo nesantya: 1-2 iiyure, 5 iiyure kwaye 9 iiyure ngokulandelana. Kweli nqanaba kucacile ukuba iindlela ngokukhawuleza ayisebenzi. Ngokutsho ulwazi yakutshanje, i “Ukuqinisekiswa kwedatha yokugcina” ngoku uthatha indawo, kut- borhwebo kulindeleke kwi 15.00 ku Berlin. Kwisithuba nje seyure phambi istock exchange i online, abasebenzisi baya kuba nako ukurhoxisa imiyalelo. Ukwengeza, iqela isaziso ukuba ibe ngumqondiso bebonga “eqhubekayo inkxaso”, kwabelana kunciphisa ikhomishini ukuba 0.03% transaction ngalinye kuFebhuwari 24.
Nangona isibakala sokuba Changpeng Jao ​​litshilo ngokuphindaphindiweyo ukuba Exchange intanethi kuphela ngenxa yomsebenzi technical, ke wakhanyela kuhlasela Uchwepheshe, abanye abasebenzisi becinga ukuba uluhlu lomnqweno yimfumba. Ukuthi ngqo, izimvo ezivela zokunaniselana efunwa ngu John McAfee, ethi “Akukho nkampani uvumile ukuba uhlaselo Uchwepheshe ide ngenkani.” Izolo ebusuku, McAfee wabhala on Twitter wakhe ukuba “akazami kuhlwayela FUD,” kodwa yena ifumana inqwaba imiyalezo ulwazi malunga uyamxhaxha istock exchange. Ukuze isithuba skrini apha, phantsi kwawo, phantsi kwe Binance logo, exchange uyavuma kusolwa ngokwayo ukuba sihlaselwa. Kwaye nangona othile inkxaso Makafi, abaninzi ummangalelwa ingcali ye crypto ulwazi akuxaswanga kwaye nobungqina ezingaqondakaliyo: “Lo mfanekiso wathumela abanye” lubhelu “qembu – ngoko nina niba izibakala?”, “Zange weva Photoshop? ukuvuthwa, “” wena ingcali yokhuseleko. ”
Makafi waphikelela ukuba “nje ubuza umbuzo” kwaye njengoko ingcali yokhuseleko uyazi ukuba “ukuba uhlaselo zange zenzeke kwaye iinzame ukuba abuyele imali zange zitshitshiswe ngoko nangoko, amathuba nokuphola babo bancipha zero phakathi 24 iiyure.” kunjalo, CEO Binance, Wawaphendula Tweets ezininzi, wathi Ndingumqondisi kusekho “ihambisa FUD”, yaye yaqinisekisa: “Siya kubonisa ukuba umhlola.” Ukusabela izityholo, Binance bathumele tweet kunye bitcoins zingabanjwanga yaye needilesi Ethereum:
Abazami ukusasaza FUD, kodwa mna ndafumana ezininzi iingxelo ezifana nale. Ndizama nje ukuqonda. Njengoko a umphandi yokhuseleko, Ndiyazi ukuba hacks enokwenzeka kude ngakumbi lula ukucombulula ukuba ziphandwe ngoko nangoko. Kwiintsuku kamva ikhulisa umsebenzi imiyalelo manitude. pic.twitter.com/u1PL9Z4tGf
— John McAfee (@officialmcafee) EyoMdumba 8, 2018
Kwenzeka ntoni Binance Exchange?
Post Previous:Canadian crypto exchange Coinsquare uphakamisa $ 30m
Post Next:Coincheck yazisa ukubuyiselwa ukuqala kwiveki ezayo